Mgbazinye ego echekwabara site na ezigbo ụlọ: gịnị ka ọ bụ | TeraNews.net
Mgbazinye ego echekwara site n’ezigbo ụlọ: kedu ihe ọ bụ
na-ede akwụkwọ Ozi Tera E bipụtara 03.09.2019
Mgbazinye ego echekwara na ụlọ bụ nnata nke ego sitere n'aka otu onye ma ọ bụ nke iwu. Ihe ekwere na nkwa bu ala ahia obula nke nwere uru ha bara n’ahịa. Ihe mgbazinye ego dị otú a na-enwekarị mgbagwoju anya na nnyefe, nke bụ ihe na-ezighi ezi. Ka emechara, isiokwu nke nkwa abụghị isiokwu nke ịzụta.
Companylọ ọrụ ọ bụla na-enye ego mgbazinye site na ala na ụlọ nwere iwu nke ya. Iji maa atụ, ọtụtụ ụlọ akụ chọrọ akwụkwọ ego ha nwetara. MFI MiG Ebelebe Astana na-enye ego maka ebumnuche ọ bụla dịka atụmatụ dị mfe, na-enweghị akwụkwọ. Ekele maka nchekwa nke ala na ụlọ Almaty - Ngwọta dị ukwuu maka ịzụlite azụmahịa nke gị.
Mgbazinye ego site na ezigbo ụlọ: uru
Nzaghachi. Nsogbu a na ụlọ akụ niile, na-enweghị nke dị iche, bụ nkwenye ogologo oge nke mgbazinye ego echekwara site na ụlọ. Nkwanye ugwu nke ulo, ihe ndi ahia choro na ebe data nke ndi otu ndi ozo, nnabata nke ego ya na isi isi, ntinye aka di na nkwekorita, mkpuchi. Companylọ ọrụ MiG Credit Astana maara ọnụahịa nke oge.
Iji nweta mbinye ego ịchọrọ mpempe akwụkwọ kacha nta:
Ndị dị iche iche - ndị a bụ akwụkwọ njirimara ma gosipụta ikike dị na nkwa, yana akwụkwọ nnabata na akwụkwọ nnabata maka ezigbo ụlọ;
Legallọ ọrụ iwu - nke a bụ akwụkwọ nke ndị mejupụtara ya na ikike ikike, yana ikike nke ndị na-achị achị nke ndị gbaziri agbaziri na akwụkwọ ndebanye aha maka ala na ụlọ.
Ezi ngosi. Anoghi n'ulo oba nwere mmasi ime ka uru ilebanye anya di na ulo ohuru na mbu. N'ezie, n'ihe banyere nsogbu ọ bụla, ụlọ akụ ahụ ka ga-aba uru. MiG Ebelebe Astana anaghị etinye aka na ụdị aghụghọ a - a na-ekwu ọnụ ahịa ọnụ ahịa ahịa. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọrụ - nleta ọkachamara na-akwụghị ụgwọ maka nyocha nke mbido ụlọ obibi.
Ọbịbịa onye ọ bụla. Na mgbakwunye na ileda uru nke ihe ala na ụlọ anya, ụlọ akụ na-agbakwunyere ụdị ihe ha. A na-enyefe ego afọ ojuju naanị na nchekwa nke ụlọ ndị dị na ụlọ ndị dị elu. Ndị ụlọ akụ na-anwa inye ego kacha nta maka ọrụ ndị ọzọ. MiG Ebe Ego Astana anaghị edozi ụlọ obibi. Lọ ndị nwere onwe, ala dị iche iche, ihe ndị na-abụghị nke obibi - enweghị mmachi ọ bụla maka onye gbaziri agbaziri. Ọ bụrụ na achọrọ, onye ahịa ga-anata mbinye ego karia 50-60% nke uru ụlọ akụ.
Mgbazinye ego site na ezigbo ụlọ: ọghọm ya
Enwere ihe egwu mgbe niile, ọkachasị n'ọnọdụ ndị ahụ mgbe ejiri ego maka mmepe azụmahịa site na ọkọlọtọ. Mana ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị a, nzukọ MiG Ast Astana dị njikere maka ikwekọrịta. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ ga-enyere onye na-agbaziri ụgwọ ịkwụghachi ego mgbazinye site na ụlọ ala na usoro dị mma.
Ndị a bụ ụlọ akụ nwere mmasị na enweghị ike nke onye na-agbaziri ego. MCO MiG Ebe nrụọrụ Astana na-arụ ọrụ maka ọdịnihu. Ozugbo iburu ego na usoro dị mma, onye ahịa ahụ ga-etinye akwụkwọ ọzọ ma ọ bụ ịkwado ụlọ ọrụ ahụ maka ndị enyi na ndị maara ya. Otu a ka esi wu ebe ahia gburugburu uwa.
Agha ahia US na China rutere mba nke enweghị nloghachi
Taxtụ isi dijitalụ kwadoro Apple na Google - echiche
Olympus - njedebe nke oge igwefoto dijitalụ
Igbe ZIDOO Z10 TV: ụlọ mgbasa ozi ọtụtụ ụlọ
2020 ejiji sneakers: Adidas Samba alaghachila
Nimses, Bitcoin, Tesla: pyramid ego
2020 - Teranews. Ikike Niile Echekwabara